Namuhla sizokutshela ukuthi umgodla uwuphi. Leli gama lingachazwa ngezindlela ezehlukene, ngoba igama linemininingwane ehlukahlukene yezincazelo futhi lisetshenziswe ezinhlokweni ezahlukene zokuphila. Incazelo yakhe ingatholakala ezinchazamazwi eziningi zaseRussia.
Cabangela incazelo yangempela yegama elithi "cuvette". Isichazamazwi solimi lwesiRussia siyichaza njengesikhumba noma ibhubhu. Ngokuvamile, umgodla uyisitokisi noma umgodi omncane onjenge-trapezoid, ngokuvamile otholakala eceleni komgwaqo noma ithrekhi. Noma kunjalo kungaba khona ezindleleni zamabhayisikili.
Inhloso yalo enkulu ukuqoqa amanzi, okwakhiwa emgwaqweni. Futhi ingaba njengamanzi. I-cuvette ingabanjwa noma iqiniswe, okungukuthi, ihlanganiswe ngokuphelele ngekhonkrit, noma iqoshwe ngamatshe. Ngezinye izikhathi lihlukaniswe nomgwaqo.
Ngaphezu kwalokho, umgodla umgodi, ohlelwe ngokukhethekile phakathi komzila wesitimela kanye nomthamo womgwaqo. Lokhu kwenziwa ukuze kuguqulwe amanzi angaphezulu kwendwangu. Futhi, ngokukhethekile kugoqwe eceleni komgwaqo, isibonelo epaki noma endaweni yehlathi. Lokhu kwenziwa ukuqoqa amanzi emva kwemvula noma iqhwa eliqhakazile. Le ndlela ivumela umgwaqo nomgwaqo ukuba uhlale usomile. I-cuvette ngumgodla owomile eceleni kwendwangu, okuhleliwe ngamatshe, ama-turf nezinye izinsizakalo.
Igama elithi "cuvette" lisetshenziselwa umkhuba wezepolitiki futhi lihunyushwe njengomnyango. ERiphabhlikhi yaseCongo , umgoqo onjalo umngcele kuPlateau, Sanga, Likuala, Garbon. Isibalo sabantu abangaphezu kuka-104 000 abantu. Inendawo engamakhilomitha angu-46 060.
Kukhona ne-Western Ditch. Lo mnyango, osesenyakatho-ntshonalanga yeRiphabhlikhi yaseCongo kanye nemingcele yeSanga neGabon. Ubuningi besibalo kuwo bangu-2.46 abantu. Ngamakhilomitha ayi-square, indawo - 28,790 km 2 , kanye nabantu - abantu abangu-70 748.
Leli zwi litholakala kwezinye izimboni. Kuzokwelapha kunezincazelo ezintathu zalesi sihloko. Okokuqala, umkhumbi uyisitsha esinezindonga eziphambene. Ngenye incazelo - ithubhu yokuhlola, esetshenziselwa ukuhlola i-radiometric noma ukuhlolwa kwe-photometric kwezinye iziphuzo. Ngomqondo wesithathu, lokhu kuyindlela lapho i-denture iphonswa khona. Ekuthungeni, umgodla umgodi owenziwe ngokuhlakanipha emanzini angajulile ukuze kuqinisekiswe ukuhamba kwemikhumbi emikhulu. Ungakwazi ukuqondisa ukugeleza kwamanzi ngendlela efanele, futhi unciphise nemizila. Elinye igama layo "umzila wamanzi". Inhloso yokudala umgodi ukuhlinzeka ngezindlela zenkantolo. Umgogodla onjalo uxhuma izitsha zomgodla ezimbili, unciphisa umgwaqo phakathi kwabo, kudala imizila yezomnotho enhle yokuhamba.
Ngaphinda futhi, faka kafushane amanani aphambili:
1 UMnyango eRiphabhlikhi yaseCongo.
Umgodlana omncane noma i-groove eceleni kwendwangu yensimbi noma emgwaqweni.
Kumele kuqashelwe ukuthi kukhona umshini wokuhlanza umkhumbi. It isetshenziselwa emigwaqweni wesitimela futhi inikeza ukuhlanza nokusika amakherubi ngesikhathi sokugcinwa kwamathrekhi okwamanje.
Indlela uxhume ifoni yakho "Varfeys": kungani kunesidingo nokulaywa
Umfanekiso oqoshwe Ezidliwayo ekhaya
Indlela ewusizo ifindo-utshani (knotweed)?
Uyini akhawunti Iyatholakala futhi kanjani ukuyisebenzisa